Maamulka Trump oo toddobaadkan mamnuucaya TikTok iyo WeChat
Maamulka Trump ayaa Jimcihii soo saaray mamnuucid baaxad leh kaasi oo mamnuucaya la soo degista iyo isticmaalka shirkadaha bulshada ku xiriirto ee laga leeyihiin Shiinaha ee WeChat iyo TikTok laga bilaabo saqda dhexe ee Axadda berri ah. Ogeysiiska ayaa ah kii ugu dambeeyay ee ku soo kordha dagaalka tiknooloojiyadda Mareykanka ee ka dhanka ah Shiinaha.
Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Ganacsiga Mareykanka ayaa walaac la xiriira amniga qaranka iyo xogaha gaarka ah u cuskaday tallaabada mamnuucista ee labada bar ee internet-ka caanka ka ah ee u adeega in ka badan 100 milyan oo qof oo ku nool Mareykanka.
Laga bilaabo Isniinta, labadan App ayaa laga saari doonaa suuqa laga soo degsado, iyadoo dadka doonaya in ay isticmaalaan aaney awoodi doonin in ku soo dejistaan taleefannadooda. Isticmaalayaasha haatan haysta labadan app ayaan awoodi doonin cusbooneysiinta TikTok iyo WeChat.
Xannibaaddan ayaa si deg deg ah uga dhigi doonta labadan app in ay duugoobaan maadaama awood la’aanta cusbooneysiintu ay ka dhigeyso mid aan la jaan qaadi karin barnaamijyada casriga ah ee Apple iyo Google, oo hadda ku xoog badan suuqa teknolojiyadda.
Amarka waxaa ka mid ah tallaabooyin lagu doonayo in WeChat looga dhigo mid aan waxtar ka lahayn Mareykanka gudihiisa iyadoo laga mamnuucayo shirkadaha Mareykanka in ay martigeliyaan taraafika internet-ka ama ay ku fuliyaan howlo ganacsi wixii ka danbeeya saqda dhexe ee Axadda.
WeChat ayaa u adeegta malaayiin isticmaaleyaal Mareykan ah oo inta badan ku tiirsan app-kan si ay ula xiriiraan oo ay ganacsi ula sameeyaan dadka iyo shirkadaha ku sugan Shiinaha.
Sida inta badan baraha bulshada, TikTok iyo WeChat ayaa labaduba waxay ururiyaan xogta isticmaalaha, oo ay ku jirto goobta iyo farriimaha si loola socdo nooca macluumaadka xayeysiiska sida tooska ah u khuseeya qofka isticmaalaya.